China na-akwụ ụgwọ ego maka ịkọ akụkọ ihe kpatara COVID-19 ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi China » China na-akwụ ụgwọ ego maka ịkọ akụkọ ihe kpatara COVID-19 ọhụrụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye ọrụ ahụike China na-ekesa ndekọ ule nucleic acid na saịtị nnwale na Heihe, ugwu ọwụwa anyanwụ China nke Heilongjiang Province.
Gọọmentị Heihe kpọkuru ndị bi ebe ahụ ka ha kọọ “ihe ngosi ndị ọzọ na-enyo enyo nwere ike metụtara mgbasa nke nje a,” gụnyere ịchụ nta n'ụzọ iwu na-akwadoghị, ịkụ azụ n'ókè na mbugharị, na-eyi egwu ntaramahụhụ maka “ndị kpachaara anya zoo ma ọ bụ jụ inye ezi ozi. ” ịkpọtụrụ ndị na-achọpụta ihe.
Ndị ọrụ obodo China kwupụtara 'agha ndị mmadụ' na ntiwapụ nke COVID-19 Delta ọhụrụ.
Ọhụrụ COVID-19 Delta dị iche iche ntiwapụ ebutela ihe karịrị ọrịa coronavirus ọhụrụ 240.
Ndị ọrụ obodo kwupụtara na ọ dị mkpa ịlụ ọgụ ndị mmadụ maka mgbochi na njikwa ọrịa.
ChinaObodo ugwu ọwụwa anyanwụ Heihe kwupụtara na ọ ga-akwụ ndị bi na mpaghara ahụ 100,000 yuan ($ 15,651) ndị na-enye "ihe ngosi dị mkpa" gbasara mmalite ntiwapụ nke COVID-19 Delta na nso nso a, nke butere ihe karịrị 240 ọrịa coronavirus ọhụrụ a. izu.
"A na-atụ anya na ọha na eze nwere ike na-arụsi ọrụ ike na ịchọta nje a ma nye nkọwa maka nyocha ahụ," ndị ọrụ obodo ahụ kwupụtara, na-ekwupụta "agha ndị mmadụ" na nje ahụ mgbe ha hụchara ọtụtụ narị ọrịa ọhụrụ.
"Ọ dị mkpa ịlụ ọgụ ndị mmadụ maka mgbochi na njikwa ọrịa."
Gọọmentị Heihe kpọkukwara ndị bi ebe ahụ ka ha kọọ “ihe ngosi ndị ọzọ na-enyo enyo nwere ike metụtara mgbasa nke nje a,” gụnyere ịchụ nta n'ụzọ iwu na-akwadoghị, ịkụ azụ n'ókè na mbugharị, na-eyi egwu ntaramahụhụ maka “ndị kpachaara anya zoo ma ọ bụ jụ inye eziokwu. ozi” ịkpọtụrụ ndị na-achọpụta ihe.
Na mgbakwunye na mpaghara Heilongjiang, nke gụnyere Heihe, a hụkwara ọrịa ọhụrụ na Henan, Beijing, Gansu na Hebei n'ime izu ndị na-adịbeghị anya, na-eme ka ndị ọchịchị obodo na ndị ọchịchị gbasie ike n'ịchọ kọntaktị ma weta ihe mgbochi ọhụrụ n'ikwekọ n'usoro izugbe China. amụma efu-COVID.
Na Central n'ógbè Henan, ndị isi nkwa N'izu a ka ịnwe ma kpochapụ ọkụ ọhụrụ site na Nọvemba 15, ya na odeakwụkwọ otu ya Lou Yangsheng na-akpọ maka "nleba anya na njikwa" nke ndị ọbịa niile na-abanye na "atumatu COVID-19 siri ike n'ụlọ akwụkwọ," n'etiti usoro ndị ọzọ.